Raysal Wasaaraha Cusub ee Itoobiya oo booqasho ku jooga Jigjiga – Radio Daljir
Raysal Wasaaraha Cusub ee Itoobiya oo booqasho ku jooga Jigjiga
Abriil 8, 2018 4:33 b 0
Raysal wasaaraha Cusub ee dalka Itoobiya Axmed Abey oo magacabaan muddo todobaad ah ayaa booqasho ku jooga magaalada Jigjiga ee xarunta Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Booqashada ayaa la xiriirta kulamo uu la yeelanayo bulshada ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo hogaankooda, isagoona kala hadlaya khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya qowmiyadda Oromada ee ay dariska yihiin.
Shacabka Ismaamulka ayaa soo dhoweeeyey booqashadii ugu horaysay ee Raysal Wasaaraha Cusub ee Itoobiya ugu yimid, iyadoo qaarkood ay ku tilmaameen mid mudnaan gaar ah lagu siiyay Soomaalida Itoobiya.
Raysal Wasaaraha Cusub ee Itoobiya Axmed Abey oo horay u hogaamin jiray Qowmiyadda Oromada ayaa dadka siyaasadda Itoobiya falanqeeya waxaa ay ku sheegayaan inay tahay mid uu uga gon leeyahay taageerada dadka Soomaalida oo horay colaad ay kala dhexaysay.
Booqashada raysul wasaaraha cusub ee Itoobiya ayaa imaanaysa iyadoo wali uu si rasmi ah ula wareegin xilka cusub ee loo magacaabay.
Madaxwayne Farmaajo iyo guddiyo kasocda baarlamaanka is-khilaafsan oo kulmay